INiantic ifuna abadlali ukuguqula amamephu wePokémon Go abe yi-3D | Izindaba zamagajethi
INiantic ifuna abadlali ukuguqula amamephu wePokémon Go abe yi-3D
Njengamanje nginesiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyazi umdlalo weNintendo onikeze inkampani yaseJapan impumelelo enjalo, kuhle, kubonakala sengathi manje iPokémon Go ilungiselela sebenzisa inguqulo entsha lapho amamephu angokoqobo ngokwengeziwe kubadlali bakho.
Kulokhu kumayelana nokuthola ukulungiswa kwemephu ku-3D, ngakho ukucwiliswa komdlali ngokungangabazeki kuzoba kukhulu. Ngokusobala lokhu kudinga umzamo omkhulu njengoba yonke imigwaqo kufanele "ibalazwe", ngakho-ke iNiantic icela abadlali bayo ukuthi basizakale ukwenza lokhu kuthuthukiswa.
Ezingxenyeni futhi ngaphandle kokuxhamazela
Lokhu, njengoba sisho, kungumzamo wangempela, kepha umphumela uzoba muhle ngawo wonke amamephu ku-3D ngenkathi i-Pokémon ithathwa. Ukwenza lokhu, ezinye zezikwele ezibaluleke kakhulu namapaki emadolobheni azoqala ukuguqulwa abe yifomethi ye-3D futhi imigwaqo, izindlela, njll. Zizoqhubeka. Umsebenzi mkhulu futhi abathuthukisi begeyimu bakulangazelele ngempela ukuqala ukusebenzisa lezi zinhlobo zamamephu emdlalweni njengoba uzokunika wona umbono ongokoqobo kakhulu.
UJohn Hanke uqobo, uchazele abezindaba inhloso yakhe yokusebenzisa lolu hlobo lwamamephu futhi mhlawumbe omunye walabo abasebenzisana kulokhu kuthuthukiswa nguwe:
"Amamephu we-AR" abaluleke ngempela ukujabulela ukungathandwa kwabathelisi esikubona. Sifuna abadlali bakhe ibhodi futhi ngenxa yamakhamera wamadivayisi eselula wabadlali bethu kuzokwazi ukudijithali nokwandisa umbono womdlali, amabalazwe e-3D ePokémon Go azothuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
Angisiye umdlali wePokémon Go, kepha labo okwamanje abadlala umdlalo odumile weNintendo nakanjani bayazithanda lezi zinhlobo zezinhlelo zokwenza ngcono. Sizobona ukuvuselelwa kwaleli hlobo ngokuthi zingakanani izindaba ezifika futhi Sethemba ukuthi ungayijabulela le mephu yangempela ye-3D kungekudala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Iqiniso langempela » INiantic ifuna abadlali ukuguqula amamephu wePokémon Go abe yi-3D
UTidal usolwa ngokukhohlisa inani lezinto ezenziwe kabusha zikaKanye West noBeyoncé
Izindaba eziyinhloko ze-Android P Beta 2